Ihe edemede Nathan Chandra na Martech Zone |
Edemede site na Nke Nathan Chandra
Nke Nathan Chandra
Nathan bụ Co-guzobere WeLink, a na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nlekota na ezubere iche maka mgbasa ozi n'elu ikpo okwu nke na-eme ka uru site na mkparịta ụka mmekọrịta ọha na eze, na-enye ndị na-ere ahịa ohere nyocha site na oke data mmekọrịta mmadụ na dashboard dị mfe.
Wzọ 5 Retail Benefits from Hyperlocal Social Monitoring
Fraịde, Septemba 19, 2014 Fraịde, Septemba 19, 2014 Nke Nathan Chandra
Rlọ ahịa na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị dị ka Amazon na Zappos. Storeslọ ahịa brik na-ngwa agha na-achọ inye ndị ahịa ha ahụmịhe kachasị mma. Trafficzọ ụkwụ bụ ihe mkpali na mmasị nke ndị ahịa (gịnị kpatara mmadụ ji ahọrọ ịbịa n'ụlọ ahịa ịzụta mgbe nhọrọ nke ịzụta n'ịntanetị dị). Egwuregwu asọmpi ọ bụla onye na-ere ahịa nwere karịa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ na onye na-azụ ahịa dị nso na njikere ime